डेलबाट कन्सेप्ट यूएफओ, निन्टेन्डो स्विचको सम्भावित प्रत्यक्ष प्रतिद्वन्द् | ग्याजेट समाचार
राफा रोड्रिगिज ब्यालेस्टेरोस | | कन्सोलहरू, घटनाक्रमहरू, हाम्रो बारेमा, भिडियो खेलहरू
यो हामी अन्तर्राष्ट्रिय घटनाहरूमा हेर्छौं, नयाँ उपकरणहरू र उपकरणहरू जुन बजारमा उपलब्ध सूचीमा थप हुनेछ। यो अवस्था मा, कम्पोनेन्ट कम्प्यूटर डेलको प्रसिद्ध निर्माताबाट हामी एक उपकरण अवधारणा जान्न सक्षम छौं जुन हामीलाई धेरै परिचित छ, अवधारणा यूएफओ.
जबकि एक प्राथमिकता मात्र हो यो प्रोटोटाइप होसबै कुराले संकेत गर्दछ कि यो विकासको चरणमा छ। र यो सम्भव भन्दा बढी हो कि २०२० मा यो सबै स्टोरहरूमा पुग्नेछ। प्रदर्शनको साथ कन्सोल nintendo त्यो "गेमरहरू" को बिभिन्न सर्कलहरूलाई मोहित गर्दछ बजार मा एक सीधा प्रतिद्वन्द्वी हुन धेरै नजिक.
कन्सेप्ट यूएफओ, स्विच को लागी एक सीधा प्रतिद्वन्द्वी
जस्तो कि हामी छविहरूमा देख्छौं कन्सेप्ट यूएफओ कल गर्न सकिन्छ डेलको निन्टेन्डो स्विच। यसको ढाँचा ट्रेस गरिएको छ, र सार्वजनिक जसको लागि यो उद्देश्य हो, उही। डेल यस क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याउन इच्छुक छ भन्ने कुरामा अझै थोरै तथ्यांक आएको छ। र प्रश्न यो हो भने एक साँचो विश्व सर्वशक्तिमान को खडा गर्न सक्षम हुनेछ.
अहिले हामीलाई थाहा छ कन्सोलसँग एउटा हुनेछ 8 इन्च स्क्रीन १२००p रिजोलुसनको साथ। र साइड नियन्त्रणहरूजो पनि छन् हटाउन योग्य, आधारभूत नियन्त्रणको रूपमा छुट्टै काम गर्नुहोस्, वा अधिक पूर्ण नियन्त्रणमा सँगै। चिपका लागि जुन मैले चढाउने थिएँ, हामीलाई मात्र थाहा छ यो एक हुनेछ १० औं जनरल इंटेल.
के यो भर पर्न सम्भव छ? यस्तो सानो पोर्टेबल उपकरणमा Alienware पीसी को सबै शक्ति? यदि यो हडताल गर्ने परियोजना गरिन्छ र कन्सेप्ट यूएफओ वास्तविकता हुन्छ भने, हामी एउटामा भरोसा गर्न सक्षम हुनेछौं सानो विन्डोज १०, तर शक्तिशाली हुन सबैभन्दा धेरै माग खेलहरू चलाउन सक्षम.
यदि हामी कनेक्टिभिटीमा हेर्छौं भने यसले धेरै सम्भावनाहरू पनि प्रदान गर्दछ। अपेक्षित रूपमा, अवधारणा UFO सुविधा हुनेछ ब्लुटुथ जडान, वाइफाइ र पनि एक संग थन्डरबोल्ट पोर्ट। यो पनि हुनेछ USB पोर्टहरू जसमा हामी चूहों वा कीबोर्ड जडान गर्न सक्दछौं तिनीहरूलाई पारम्परिक पीसीको रूपमा प्रयोग गर्नका लागि। के हामी एकको सामना गरिरहेका छौं गेमरहरूको लागि मिनी कम्प्युटर? एक निन्टेन्डो भिटामिन स्विच? के तपाईले देख्नु भएको कि यस प्रकारको उपकरणको बजारमा अन्तर छ?
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » सामान्य » हाम्रो बारेमा » डेलले कन्सेप्ट युएफओ प्रस्तुत गर्दछ, निन्टेन्डो स्विचको यसको "संस्करण"
जनवरी २०२० को लागि नेटफ्लिक्स र एचबीओमा के हेर्ने